Chemicals Kuzadza Machine - Micvd.com
Kana iwe uchida michina yakavimbika, inogara-refu yekurongedza yemuchina wako wekuzadza mvura, NPACK ane zvese zvaunoda. Isu tinonzwisisa kuti kuita kwekuzadza midziyo nemakemikari zvigadzirwa kunouya nezvimwe chaizvo zvinodiwa - sekushandisa michina inogona kumira mukushungurudzwa kwemakemikari. NPACK'Mafuta-ekuzadza michina anogona kuitirwa kune zvaunoda chaizvo, kuve nechokwadi chekuti haufanire kunetseka nezvekutadza kwemishini chero nguva munguva pfupi.
Tora Muchina weChemical Kuzadza Maindasitiri Uye Zvekurima Chemicals
Makemikari anouya zvakasiyana siyana acidity uye viscosities, uye ekunze mabhodhoro zvigadzirwa zvevamwe zvinogona kusawirirana nevamwe. NPACK yakashanda nemhando dzakasiyana-siyana dzemakemikari, kugadzira michina yekuzadza pane imwe kesi-ne-kesi kuti ive nechokwadi chekuenderana kwakanyanya. Kana iwe ukashanda nesu, isu toshanda nesimba kuwana michina yepamusoro yeyako yakatarwa yekurongedza, kuona kuti michina yako inoshanda pamwe chete zvisina simu. Kunyangwe iwe uchingoda chete mafirimu filters kana yakazara yakazara-up, iwe unowana chaunoda ne NPACK. Isu tinodada nekushandira akati wandei maindasitiri akasiyana, kusanganisira maindasitiri emaindasitiri nezvekurima.
Liquid Botoro Yekuzadza Machina
Paunenge uchida yemagetsi mafirita emidziyo yako, unogona kutarisa kuburikidza nekusarudza kwedu kwemakina akasiyana michina kuti uone kuti ndeipi (s) ichave yakanaka pakushandisa kwako. At NPACK, tinodada nekutengesa akasiya siyana emadzimadzi emvura kuti anokwane zvinoverengeka zvezvinodiwa, kusanganisira kuwirirana nemishonga yemakemikari
Nei Sarudza NPACK Yako Yekurongedza Midziyo Yako?
Muchina wekuzadza makemikari akagadzirirwa kurima kana maindasitiri emakemikari anofanirwa kugara achigadzirwa pamwe nezvinodiwa kuti dzidzikise, pamwe nekugonesa ma viscosities akasiyana pamwe nemidziyo inofamba. NPACK inogadzirisa mhando dzakasiyana dzemeshini dzemabhotoro emakemikari, uye isu tine ruzivo nezvose zviri zviviri zveindasitiri nezvekurima zvinosanganisirwa. Kunyangwe chero chigadzirwa chauri kuzadza, isu tine chimwe chinhu chinoenderana nezvaunoda.
Bata nesu nhasi kuti tidzidze zvakawanda nezve maindasitiri atakashandira, uye mhinduro dzakanakisa dzekuzadza mabhizimusi ezvigadzirwa zveindasitiri nezvekurima. Isu takagadzirira kukubatsira iwe kuti uwane yakakwana mvura yekuzadza zvishandiso zvebhizimusi rako rekuturika zvinodiwa.
NP-VF-1 Dhivhaji Yekuzadza Mashini
NP-VF-1 Automatic dhiziri rekuzadza muchina
NP-GF Bleach Kuzadza Machine
NPACK NP-GF Bleach Liquid Kuzadza muchina unogadzirirwa zvakanyanya kune yakaderera viscosity asi inodonhedza mvura kuzadza. Muchina wacho wose unodzorwa neSchneider PLC, iyo inogona kuona kuzadzikiswa chaiko, kushanda kwakasimba uye nyore paramende kuronga. Chikamu chepneumatic chinogamuchira AirTAC chiratidzo chekutarisa kwenguva refu kugadzikana kwakasimba. Izvo zvinozadza kuzadza Acid, alkali zvigadzirwa, zvakanyanya kuparadza mishonga yekuuraya zvipuka, 84 disinfectant, chimbudzi kuchenesa, iodine, nezvimwe.
1. Zvese zvemuchina zvigadzirwa zvakavakirwa nePVC kune anti zvinogadzirisa zvinosanganisira iyo inotakurika, yekudzora bhokisi.
2. Schneider PLC kutonga, uye Schneider touch screen oparesheni, zviri nyore pakushandura saizi kana kugadzirisa paramende.
3. Pneumatic zvinhu zvese zvinounzwa, kugadzikana uye kuvimbika.
4. Photo-magetsi kunzwa uye pneumatic kubatanidza kudzora, otomatiki kudzivirira kuperevedza kwebhodhoro.
5. Yepedyo yekumisa dhizaini, iri nyore kutonga, yakakodzera kutakura yehukuru hwese hwemabhodhoro.
mhando NP-GF otomatiki dhiraivhu Kuzadza muchina (rakapora mvura)
mokugezera 6 8 10 12 16 20
Idea Kuzadza nzvimbo 100-1000ml, 500-5000ml
Mabhodhoro ekushandisa Yakatenderedza, yakatsetseka kana inorongedza mabhodhoro
Power zvitengeswa 220V, 50hz
1. Shandisa yakasimba uye yakareba hupenyu hwePVC zvinhu
2. PLC kutonga, uye gadzirisa vhoriyamu yekuzadza neye touch screen
3.Mutengo wakaderera wekudyara
4. Kudhiza kuzadza musoro kune anti foamy
NP-GF Corrosive Liquid Kuzadza Machine
NPACK NP-GF Corrosive Liquid Kuzadza muchina yakarongedzerwa zvakanyanya kune yakaderera viscosity asi inokanganisa yemafuta kuzadza. Muchina wacho wose unodzorwa neSchneider PLC, iyo inogona kuona kuzadzikiswa chaiko, kushanda kwakasimba uye nyore paramende kuronga. Chikamu chepneumatic chinogamuchira AirTAC chiratidzo chekutarisa kwenguva refu kugadzikana kwakasimba. Izvo zvinozadza kuzadza Acid, alkali zvigadzirwa, zvakanyanya kuparadza mishonga yekuuraya zvipuka, 84 disinfectant, chimbudzi kuchenesa, iodine, nezvimwe.
1.Zvose zvinoshandiswa nemichina zvinogadzirwa nePVC kuti inopesana nehutachiona kusanganisira iyo inotakura, bhokisi rekudzivirira.
2.Schneider PLC kutonga, uye Schneider touch screen kushanda; zviri nyore nekuchinja saizi kana kugadzirisa ma paramitha.